Kabaha, Kabaha Ragga, Kabaha Haweenka - Kabaha Ruchun
Sfty- Kabo & BaroodhhoShoes
Naqshadeyso oo samee shaybaarro bilaash ah iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
Samee wax soo saarka iyada oo la xaqiijiyo saambiyada iyo shuruudaha kale ee macaamilka.
Qalabka buugaagta la soo diro loo soo diro ama soo shaqeeyaha nagala shaqeeya.
IYAGOO SII SAMEE CALAYMADA
Waxaan leenahay labo warshadood, 3 xariiq wax soo saar oo leh qalab dhameystiran oo qalab sareeya, in kabadan 300 oo xirfad yaqaan ah. Wax soo saarka ugu weyn waxaa ka mid ah kabaha isboortiga, kabaha caadiga ah, kabaha duugga ah ee dadka waaweyn iyo carrurta. Ujeeddadayadu waa in aan kuu soo bandhigno kabo tayo sare leh oo qiimo sarreeya!
Dharka cadcad ee Marwada RCWP202003
Qodobka No: RCWP202003 Jinsi: DUMARKA ...
Kabaha Kabaha Caruurta RCKP202002
Qodobka No: RCKP202002 Jinsi: BOYS & ...
Kabaha Cushion ee RCW202001
Qodobka No: RCW202001 Jinsi: DUMARKA ...
Kabaha Cushion ee RCNP202001
Qodobka No: RCNP202001 Jinsi: GRAY, BLAC ...
Ragga kabaha caadiga ah RCNP202002
Qodobka No: RCNP202002 Jinsi: MEN Colo ...
Haweenka Dharka Kabaha RCWP202002
Qodobka No: RCWP202002 Jinsi: Haweenka D ...
Kabaha Midabada RCNP202003
Qodobka No: RCKP202001 Jinsi: BOYS Col ...
Qodobka No: RCNP202003 Jinsi: MEN Colo ...
FuJian JinJiang Ruchun Shoes Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2013 waxayna ku taalaa Quanzhou, gobolka FuJian, waxay dabooshaa aag dhan 9600 mitir murabac ah waxayna leedahay in kabadan 300 oo shaqaale. Waxaan nahay mid ka mid ah soo saareyaasha kabaha xirfadda leh ee ku takhasusay casriga, kabaha isboortiga oo leh naqshad moodada loogu talagalay ragga, haweenka iyo carruurta. Waxaan leenahay qalab wax soo saar oo horumarsan, awooda R&D madax banaan iyo koox xoog leh QC.Han iskaashi fog oo aan la leennahay jumlado badan, dukaameeysatayaal iyo wakiilo caalami ah. , DUCATI, CHAMPION, UMBRO, iwm.
Waxaan leenahay labo warshadood oo leh seddex xarumood oo wax soo saar ah waxaan kaloo leenahay in ka badan 10 warshadood oo muddo dheer wadashaqeyneed ay leeyihiin. Xulo annaga ayaa ka dhigan dooro qiime ka raqiisan sicirka badeecad isku mid ah oo isku mid ah.
Warshadu waxay sameysaa oo ay ka gudubtaa BSCI sanad walbo oo ay awood u leedahay inay iskaashi la sameyso iibsadaha sameeyso xisaab hubinta kale ee warshad haddii loo baahdo
Naqshadeynta xirfadleyda iyo kooxda horumarinta si ay u bixiyaan adeegyo loo habeeyay.
Kormeerka tayada xirfadeed iyo qalabka baarista si loo hubiyo tayo wanaagsan.
Dhammaan su'aalahaaga ama jawaab-celintaada emayl ahaan waxaa looga jawaabi doonaa 24 saac gudahood. Haddii aad rajeynaysid inaad isla markiiba jawaab ka hesho, haka labalabeyn inaad kudarto WECHAT 0086-13030971530.
Dhismaha Teknolojiyadda Tianqin, Qudaarta Galbeedka, Jinjiang, Quanzhou, Shiinaha
Kabaha Aabaha ayaa dib ugu soo laabtay Digi Ragga Milan ...
Hoggaamiyeyaasha Dharka iyo Kabaha ayaa ku baaqaya “Co ...